Shiinaha 2 1 koob oo warshad mashiinka saxaafadda kuleylka ah iyo soo saarayaasha | Taile
2 1 koob oo ah makiinada saxaafadda kuleylka kuleylka ah
Mashiinkaan 2-da 1 ah ee kuleylka kuleylka ah wuxuu ku wareejin karaa sawirro midabbo leh, ereyo koob ah, oo ku habboon soo saarista hadiyado, qurxinno, gaar ahaan ku habboon xayeysiinta, hadiyadaha, howlaha xayeysiinta, waxyaabaha gaarka loo leeyahay iyo warshadaha kale
1. [Si fudud loo hawl galo]: Xakamaynta wakhtiga dubista otomatiga ah. cadaadis la hagaajin karo. la imaado wax hagaajinta heerkulka iyo qeylo dhaan la maqli karo. xitaa walxaha kuleylka u adkaysta cadaadiska ayaa wali xasilloon illaa 230 ° C (450 ° F).
2. [Tilmaamaha heerkulka LED-ka]: Muuji heerkulka (Fahrenheit) iyo waqtiga si sax ah. heerkulka: 0 - 450 darajo F; inta udhaxeysa waqtiga: 0 - 999 ilbiriqsi. si otomaatig ah u xakameynta waqtiga.
3. 【Laba Mug Lifaaq oo lagu daray included: Mug Press # 1 3 "-3.5" dhexroor (11oz), Mug Press # 2 12oz latte mug (cone)
4. [Badbaadada la isticmaalayo]: Mashiinkaan saxafadda kuleylka kuleylka leh wuxuu leeyahay gacan-qabsi isku mid ah oo leh ergonomic foam-xajin, gacmahaagana ka fogeynaya walxaha kulul.
5. [Wide applicationv]: Mashiinka kuleylka kuleylka wuxuu wareejin karaa sawiro, ereyo koob ah, oo ku haboon soo saarista hadiyado, qurxin, xayeysiin, waxqabadyo xayeysiin ah, alaabooyin gaar ah iyo warshado kale. Astaanta dubista, sawir ama sawir dusha mugga loogu talagalay xayeysiinta, ujeeddada hadiyadda oo leh farshaxanno iyo saameyn la adeegsaday.
6. [Badbaadada la isticmaalayo] Mashiinka saxaafadda kuleylka leh ee koobku wuxuu leeyahay gacan qabsi isku mid ah oo leh ergonomic foam-xajin, gacmahaagana ka fogeeya mashiinka kuleylka leh. Ku soo gala shaqada saxitaanka heerkulka iyo qeylo dhaan caqli leh.
7. [Xamili dahaarka leh] Qabsashada cinjirka ee raaxada leh ee loo isticmaalo maalin kasta iyo wax soo saar dheer.
8. [Feejignaan xiisad hagaajin ah] Si fudud loo heli karo, leexashada qaabka u oggolaaneysa cadaadiska in lagu saxo si waafaqsan si loo hubiyo cadaadis sax ah iyo wareejin nadiif ah.
9. [Waxyaabaha Teflon dahaarka leh] Dusha sare ee nonstick waxay ka hortagtaa wareejinta gubashada, umana baahna waraaqo silikoon / teflon oo gooni ah.
10. [Codsiyo badan oo nolosha ah] Ku habboon koobka dhoobada, dhalada aan birta ahayn, muraayada dhalada ah, iyo dhalada aluminium, iwm ... (walxaha adag waa in la dahaadhaa) waxaad awood u leedahay inaad abuurto shaqsiyad gaar ah oo ku takhasusay inaad ku bixiso hadiyad loogu talagalay oo lagu abuuray kuu gaar ah, sidoo kale waa hab wanaagsan oo lagu kordhiyo ganacsigaaga sublimation.
11. [Ka dib adeegga iibka]: Dammaanad Qanacsanaanta.Haddii sabab kasta ha noqotee aadan ku qanacsanayn, fadlan nala soo socodsii oo adeegga macaamiishayadu waxay ku dadaali doonaan inay ku caawiyaan.
Aqbasho 1.Power: 110V / 220V
Ku lifaaqan mugga 2.2x: 3.1 "- 3.5" dhexroor (9 "L x 4.5" H)
Tusaale ahaan: 3.3 "x 3.7" height mug weyn
Meesha u dhiganta ee wareejinta: 7.9 "x 3.8"
Ku xirnaanta bakeeriga
3.5 "dhexroor sare x 2.5" dhexroor hoose x 4 "dherer latte mug
Meesha u dhiganta ee wareejinta: 7.9 "sare x 6" hoose x 3.3 "dherer
3. Heerkulka heerkulka: 0 - 430 Fahrenheit degree
Muddada u dhexeysa: 0 - 240 ilbidhiqsi
5.Tilmaamida heerkulka: -5 ~ +5 Fahrenheit degree
Talaabooyinka lagu daabacayo sawirkaaga dhijitaalka ah bakeerigaagu:
Tallaabada 1: Sawir qaado oo ku daabac khad sublimation ah iyo daabacaadda inkjet warqadda sublimation ah.
Tallaabada 2: Iska yaree warqadda cabbir ku habboon.
Tallaabada 3: Ku shub weelka mashiinka si aad cadaadiska ula qabsato oo aad uga saarto. Fadlan ogsoonow in: walxaha adag waa in la dahaadhaa. (Haddii saamaynta sublimation ay liidato, fadlan hubi haddii ay jirto daaha sublimation dusha sare)
Tallaabada 4: Tixraac buug-gacmeedkeenna oo deji heerkulka iyo waqtiga.
Tallaabada 5: Sug mashiinka kululaynta illaa heerkulka bartilmaameedka.
Tallaabada 6: Ku shub bakeerigaaga warqad sublimation ah heerkulkuna aad buu hoos ugu dhici doonaa
Tallaabada 7: Marka heer-kulku u kaco heer-kulka bartilmaameedka, riix badhanka Ok.
Tallaabada 8: Marka mashiinku buuqayo, weelka ka bixi.
Hore: Cusub 5 mid ah 1 mashiinka saxaafadda kuleylka kuleylka ah